ခရီးသွား, ဓာတ်ပုံအက်ဆေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ, ယဉ်ကျေးမှု
အာရှအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ တစ်ချိန်တစ်ခါက အန္တရာယ်များလွန်းသော ကော့ကရိတ် တောင်တက်လမ်းကို မှေးမှိန်စေခဲ့ပြီး ထရပ်ကားသမားတွေ အတွက်လည်း တစ်ခေတ်တစ်ခါက ထိုဖြတ်လမ်းကို ပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလကို အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါပြီ ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ “လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ပျင်းစရာကြီး။ တောင်တွေပေါ်မှာပဲ ကောင်းပါတယ်” လို့ ကုန်တင်ကားသမား ဦးဝင်းထွန်းက ပြောကြားလိုက်ခြင်းပါ။.
လက်တွေ့ကျကျ ဖော်ဆောင်ရမယ့် မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ခေတ်မီစနစ်တွေ မရှိကြဘူး၊ သူတို့က အခုထိ လက်နဲ့ လုပ်နေရတုန်းပါပဲ ပီတာ ဂျင်ဆင် ရေးသားသည်။ စီဘီဘဏ်ဟာ အောက်တိုဘာလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းကတစ်ဆင့် ငွေပေးချေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုဘိုင်းကတစ်ဆင့် ငွေပေးချေတာက ရန်ကုန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့ရေး.
ပီတာ ဂျင်ဆင် ရေးသားသည်။
ကွန်ဒိုစီမံကိန်းများကို လုပ်ငန်းရှင်များက ပြန်လည် သုံးသပ်လာနိုင်
ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဟိုတယ်နှင့် ရုံးခန်းတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု။ ဓာတ်ပုံ- အန်းဝမ် ရန်ကုန် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ဆောက်လုပ်သူများအနေနဲ့ ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာများကို ပြန်လည် စဉ်းစားလာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်း စက်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မြေယာများရဲ့ ဈေးကွက်ကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်တယ်လို့ Colliers International Myanmar က.
နစ်ဆန်းက ပြည်တွင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်များ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မှုကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်တော့မည်
ရန်ကုန် ဂျပန် ကားကုမ္ဗဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် နစ်ဆန်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော်ယာဉ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုများကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်တော့မည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်က ပြောကြားသည်။ မလေးရှားကုမ္ဗဏီဖြစ်သည့် Tan Chong Motor Group နှင့် ပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားသည့် စက်ရုံတွင် မော်တော်ယာဉ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မှုများ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးမြို့အနီးရှိ.
ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်သွားရန် တပ်မတော်က နယ်မြေ ရှင်းလင်းနေ
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူလူထုအား ထိခိုက်လာသည့်အတွက် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်သွားရန် တပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလင်းနေခြင်းဖြစ်သည်
ပလောင်ဒေသနှင့် ကျောက်မဲအကြား တိုက်ပွဲများ အမြန်ရပ်ဆိုင်းရန် လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမည်
အရေးကြီးအဆိုအား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်
စိုးသန်းလင်း နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
အောင်လအန်ဆိုင်းက မိုဟာမက်အလီနှင့် ရန်ကုန် အမ်အမ်အေပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မည်
ယခုပွဲသည် ကချင်လူမျိုး အောင်လအန်ဆိုင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရမည့် ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံကို အာရုံစိုက်ကြရန် ထိုင်းအစိုးရ တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှု သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည့်အတွက် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အာရုံစိုက် ဦးတည်ချက်ထားကြရန် ထိုင်းအစိုးရက တိုက်တွန်းထားသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် နေးရှင်းသတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စားသောက်ကုန်တင်ပို့မှုမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်ဟု စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ အင်စတီကျူက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဂျပန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်.
Frontier နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဘားတွေ